RASMI: Xilliga dib loo ciyaari doono kulamada ka harsan tartanka FA Cap-ka oo shaaca laga qaaday – Gool FM
Miyuu Lautaro Martínez ka codsaday Inter Milan in loo ogolaado ku biirista kooxda Barcelona?? Waxaa ka jawaabaya Giuseppe Marotta
Dajiye May 29, 2020
(England) 29 Maajo 2020. Xiriirka kubadda cagta England ayaa ku dhawaaqay taariikhaha dib loo ciyaari doono kulamada ka haray koobka FA Cup, kaddib markii la go’aamiyay in dib loo bilaabo howlaha kubadda cagta bisha soo socota.
Maamulka horyaalka Premier League ayaa waxay shalay go’aamiyeen in dib loo bilaabo xilli ciyaareedka horyaalka 2019/2020 maalin Arbaco ah 17-ka bisha June ee soo aadan, xilli kulanka ugu horeeya ay Man City soo dhoweynayso Arsenal.
Haddaba siddeed dhamaadka koobka FA Cup-ka ayaa la ciyaari doonaa 27-ka iyo 28-ka June, waxaana lagu ciyaari doono garoonka Wembley oo bilaa taageero la’aan ah.
Labada kulan ee afar dhamaadka ayaa la ciyaari doonaa July 11 iyo 12, halka kulanka Finalka la ciyaari doono 1-da August.
Mark Bullingham oo ah madaxa Xiriirka kubadda cagta England ee FA-ga ayaa sheegay:
“Waxaan ku faraxsanahay inaan ogolaano taariikhaha cusub ee kulamada FA Cup, madaama tartanku uu yahay qeyb muhiim u ah kalandarka kubbadda cagta Ingiriiska muddo ku dhow 150 sano”.
Haddaba dhanka hoose kaga boggo isku aadka wareega siddeed dhamaadka ee koobka FA Cup:
Norwich City vs Manchester United.